Taariikhda muranka badda Kenya iyo Soomaaliya | Warbaahinta Ayaamaha
MUQDISHO-AYAAMAHA-Dacwaddan la xiriirta muranka dhanka xuduudda badda ayaa soo jiitameysay in ka badan 10 sano, balse dowladdii madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii July ee 2014-kii, maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo dooneysa in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka.
14 March 2021, dowladda Kenya ayaa isaga baxday dhageysiga kiiska muranka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya, sida ay BBC-da u xaqiijiyeen ilo ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha dalka Kenya.
15 March 2021, waxaa si rasmi ah u bilowday dhageysiga kiiska oo ay qaadeysay ICJ. Waxaa ka qeybgalay oo dooddooda gudbiyay qareennada Soomaaliya u doodaya oo keli ah. Maadaama ay Kenya isaga baxdayna, ma aysan gudbinin dooddeeda.